အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ကျွန်တော်နှင့် တစ်နေ့တာ...
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:39 AM
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျို့ လူတွေ အားလုံး အမျိုးမျိုးသော ဟန်ဆောင် ဖုံးကွယ်မှု တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာပဲ...။
ဒါပေမယ့် ဒီလို လူတွေ ကြားထဲ တိုးဝင်လိုက်တော့လဲ ကိုယ် ပါ ထူး၍ မဆန်းသော လူတစ်ယောက် ဖြစ်သွားတာပဲ..။
ဖတ်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ရေးထားတာ မှန်လွန်းလို့ ထင်ရာမြင်ရာ လက်ဆော့ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု လုံးဝမယုံပါဗျို့ ။ တစ်နေ့ တာအပြင်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်မှု ကိုတော့ သဘောကျတယ်မောင်လေး.....( မအိ....! )
ကိုလင်းထက်ကြီးပြောသလိုပဲ :P မပြောတတ်တော့သူများပြောထားတာလေးပဲ ညွှန်းရတာပေါ့။ အရေးအသားတွေပြန်ကောင်းလာပြီ။
သူတစ်ပါးအမှားမှ သင့်အတွက် သင်ခန်းစာယူပါ ဆိုတဲ့ စာကြည့်မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ဖတ်လိုက်တယ် မမြင်ရဘူး ဒါနဲ့ပြန်ချွတ် မျက်လုံးတွေက ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုမျက်မှန်နဲ့မှ ဒီစာကိုဖတ်လို့ရတော့တယ် ဒါနဲ့ မနိုင်သဖြင့် သည်းခံရခြင်း အပြုံးတွေဖောဖောသီသီလွှတ်ချပြီး တခြုံကွယ် တမယ်မေ့ဦးဏှောက်နဲ့ ဒီစာကို ၆ခြုံတိတိပတ်တယ် အိုးရွဲ့စလောင်းရွဲ့ကောမန့်တစ်ခု ဘလက် အခုငါစာဖတ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားတစ်ခုလဲလိုက်တယ် ရေများရာမိုးရွာတာလဲ အမှန်တရားပဲ ဘာလို့ဆို ရေများလို့သာ ရေငွေ့များရတာမဟုတ်လား နင်နားလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်
အဆုံးမှာတော့ အရာအားလုံးဟာ အဆုံးသတ်သွားကြတာပါ
အရမ်းကြိုက်သွားပြီဗျို့ အရေးအသားရော idea ရော
အပြစ်ပြောစရာကို မရှိဘူး ..
လေးစားပါတယ်ဗျာ .. ဒါကတော့ ဟန်ဆောင် ရေမွှေး မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ :P .. ပင်ရင်းက ထွက်တဲ့ နွားနို့စစ်စစ်လေးပါ
လဖက်ရည်ဆိုင်ရောက်မှ ရေရော တာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ ..
ဟီးဟီး ဘာတွေ ပြောနေမိမှန်းကို မသိဘူး
တင်ပြပုံ ကောင်းတယ် ညီ blackdream ရေ ၊၊အနှစ်သာရရှိလှတယ်ဗျာ ၊၊
ငါတော့ ဟန်ဆောင်မှုကို အတော်မုန်းတာကွ....... ရွေးချယ်စရာ တခြားမရှိတော့ဘူးလား :D :P
အရမ်းတော်တဲ့ ငါ့မောင်လေး။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အတွေးတောင် ဒီလောက်မကောင်းဖူး။ :)
အပျင်းပြေလာဖတ်ပါ ဆိုပေမယ့် တကူးတက ဖိတ်ထားတာဆိုတော့ တသေတချာ လာဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ကိုအိပ်မက်ရေ...။ ကျနော်ကတော့ ကိုအိပ်မက် ထင်ရာမြင်ရာ လက်ဆော့ထားတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ စနစ်တကျ ကလောင် သော့ထားတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ကိုBlackကြီး နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ ကွန်မန့် တွေက တော်တော်များနေပြီ။ ဟဲဟဲ တခြား မဟုတ်ပါဘူး။ ၀တ်စုံတွေ၊ ဖိနပ်တွေ ထဲက တချို.ဟာလေးတွေ နည်းနည်းလာတောင်းတာ။ ကျနော့် မှာလည်း ဒါတွေချည်းပဲ။ တံဆပ်မတူပေမယ့် အမျိုးအစား တူတူပဲဗျ။ ၀တ်ရဖန်များလို့ကြေမွပြီး အရောင်မှိန်လို့ ။ ဟီး ရေမွှေးလေးပါ ဆွတ်သွားတယ်ဗျို.။
ထင်ရာမြင်ရာလက်ဆော့ထားလို့ပဲ ကိုယ့်ဆရာရေ ..
အမှန်အကန်သာရေးရင် လိုက်မှီမှာတောင်မဟုတ်ဘူး ....
တစ်ခါတစ်လေ လူတွေကလည်း ထင်ရာမြင်ရာကို စားသုံးနေတက်ကြတာပဲလေ .. မှန်နေတာပဲ
ထင်ရာမြင်ရာကလည်း ကောင်းလှချည်လားဗျာ။ တကယ်မိုက်တယ်ဗျို့။
မဲကြီး.. မင်းယူနီဖောင်းက ဒီလိုကျတော့လည်း ငါတို့နဲ့ အကုန် အတူတူပါပဲလား... သိပ်မကွားဘူး... :)
အစ်ကိုရေ့ ညီကတော့ ဘာကိုကျင့်တရားတွေမှမ၀တ်ချင်တော့ လောက်အောင် အသားကပ်လေးပဲ ၀တ်ချင်လို့အဲ့ဒီလောကနိဓိတွေ လိုက်နာရတာ လူတစ်ကိုယ်လုံး ချဉ်စောနံနေပြီးး Acqua Di Gio ရေမွှေးလေး စွတ်သွားတယ် ရှူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အက်ဆေးရဲ့ သီအိုရီကို ကျွန်တော် နားမလည်ဘူးဗျာ
တာရာမင်းဝေ အတွေးသစ်တွေ ခံစားခွင့်မရှိတော့တဲ့ အခြေအနေကို
အကို ပို့စ်တွေနဲ့ အစားထိုးဖြေသိမ့်လို့ရတာပေါ့
သေတော့မယ် ရယ်ရလို့။ နောက်ဆို အစ်ကို့ပို့စ်ဖတ်မယ်ဆို ရေတစ်ခွက်အမြဲဆောင်ထားရမယ်။ စတာနော်။ တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလေးပဲ။
အမြဲနောက်ဆုံးမှ ရောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ ညက်ညောတဲ့စာပေကို သူများတွေလိုပဲ တန်းတူ ဖတ်ခွင့်ရပါတယ်...။
မရောက်တာလဲကြာပြီကွာ... ရောက်ပြန်တော့လည်း ငါ့ကိုယ်ပေါ်က ဝတ်ထားတာတွေပဲ မင်းက ရေးထားတော့... နည်းနည်းတောင် မလုံသလိုပဲ... အတွေးတွေ တကယ်ပြောင်မြောက်တယ်ကွာ... ကြိုက်တယ်... ဒီအဝတ်အစားတွေနဲ့ပဲ လူတောတိုးနေရတာ ကြာတော့လည်း မေ့တောင်နေပြီကွာ... မှန်ဆိုတဲ့ အယူအဆမှာတော့ သဘောထားချင်း အတူတူပဲကွ...
ကိုအိပ်မက်နက်ကြီးရေ black ပါတဲ့လူတွေတော်ကို တော်တယ်ပြောထားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်မလုံမလဲ ဖြစ်နေပြီဟားဟား ဒီလောက်ကောင်းတာတောင်ဒီ လောက်မကောင်းနိုင်တော့ဘူးဗျို့ အရေးအသားကတော့ ရှယ်ပါပဲဗျာဇွန်းတပ်ပြီးများရေး လေရော့သလား စတာနော် တစ်ကယ်လေးစားဖို့ကောင်း တာတော့ငြင်းမရအောင်ပဲဗျို့ ကျွန်တော်ကတော့ကိုအိပ်မက်နက်ရေးတဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သွားသတိရတယ်ဗျာ တာရာမင်းဝေလေ အငွေ့အသက်တွေရနေတယ်ဗျာ
သယ်ရင်း....နင်ကတော့သူများနဲ့မတူတမူထူးခြားအောင်လဲတော်တော်တတ်တာပဲ ဂွတ်တယ်အရမ်းပဲ နင့်ခေါင်းကောင်းတယ်ငါ့ကိုခဏလောက်ငှားပါဦး
အရမ်းကောင်းသော eassy ပါ။ အရှေ.ပြောသွားသလို အတည်သာစဉ်းစားပြီး ရေးရင် ပြောဖွယ်ရာမရှိ ဖြစ်နေမှာပေါ့။
စာတွေလာဖတ်သွားပါတယ်..။ ရေးထားတာကိုဖတ်ပြီး..ကဗျာ.တစ်ပုဒ်လောက်ရေးချင်လာတယ်.။ တစ်ညလုံးအိမ်မက်တွေ..ပေနေခဲ့တဲ့တို့
ထုံးစံအတိုင်း သိပ်ကောင်းပါတယ်။ “လောဘ ဂုဏော အနန္တော၊
မောဟ ဂုဏော အနန္တော” တဲ့။ ဘယ်လိုတွေများတွေးပြီး ဘယ်လိုတွေများ ရေးနေသလဲ ကိုဦးရေ။ “အနံ့တထောင်းထောင်းထနေတဲ့ "ဟန်ဆောင်မှု" တွေ ဆွတ်ထားတဲ့ လူတွေကြားထဲ...” ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ငုံ့ပြီး အနံ့ခံကြည့်မိလိုက်သေးတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့ ဒီနေ့ နှာစေးနေလို့...း)
မနက်ခင်းလေး တစ်ခုစာကို ဖတ်ရတာ တော်တော်ကို ချာချာလည်သွားတယ်။
တိုး......၀င်......မှုန်ဝါး.....ကွယ်.....ပျောက်.....။ ဆိုတဲ့ စကားလုံးမှာ ထင်ရှားနေတဲ့ "မှုန်ဝါး" ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်နေတာကို အကြာကြီး ငေးနေမိတယ်။
မျက်မှန်တပ်ပြီးကို အသေအချာဖတ်သွားတယ် ..စာရေးကောင်းလိုက်တာ..အတွေးလဲ ကောင်းတယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေး။ အတွေးတွေ အများကြီး ထည့်ပေးတယ်။
ပြီးသွားချိန်မှာ .....အံ့သြချီးကျူးလေးစားခြင်း မျက်မှန်နဲ့ နင့်ကိုမြင်မိသွားတယ်...း)
ဟန်ဆောင်ခြင်း..အတတ်ပညာကို လူတိုင်း တတ်မြောက်ကြတယ်...ထုံးစံအတိုင်း ...ဟန်ဆောင်ပျော်ရွှင်ရင်း ငါ့နေ့စဉ်တွေကို ဆက်လက်ရပ်တည်လိုက်အုံးမယ်...
တယ်မိုက်နေပါလား.. ဟန်ဆောင်မှုရေမွှေးနံ့တွေကြားမှာငါလဲ တော်တော်ခေါင်းမူးနေပြီ.. ဒါပေမဲ့ ရေမွှေးမဆွတ်တော့လဲ ကိုယ်ပဲ ချဉ်စော်နံမယ်မှတ်လား.. ငါကတော့ အနံ့သိပ်မပြင်းတာပဲဆွတ်တယ်... ဟဲ.. ဟဲ..
ဘာတဲ့.. အီစီကလီမရှိရင် ယောင်္ကျားလေးကမတင့်တယ်ဘူးဟုတ်လား.. ဆင်ခြေတွေ.. ဟွန်း..
အားလုံးပြီးမှ သတိထားမိတယ် ကျွန်တော့်ရှေ့ကဟာကြီးပေါ့။ ဘာကြီးရမှာလည်း ..)
အဲဒိနေရာမှာငါနဲနဲလန့်သွားတယ်.. နင်ဘာကြီးကိုများရေးတော့မလဲလို့.. နောက်တော့ မှန်ဖြစ်နေတာကိုးးးးးးးးးး... ဟီး.. (စတာ... )
လူတွေကြားထဲမှာ ကြက်သားရေ ခေါင်းပေါင်းလေးလဲပေါင်းလိုက်ရင် ပိုပြီးပြည့်စုံသွားမယ်ထင်တယ်။
မင်းက ပြက္ခဒိန် သေချာမကြည့်လို့ပါ
အဲဒါတွေက အာရုံနောက်နေတဲ့ နေ့တွေလေ
လာဘ်ပြည့်ရက် လာဘက်ကွယ်ရက်ကို သေချာကြည့်နိုင်ရင်
လူတွေကို တွေ့ရတာ အဆင်ပြေတယ်ကွ
ဗေဒင်မေးလဲ ဒါပဲဖြေမှာ ဟုတ်တယ်ဟုတ် :D
လန်ထွက်သွားပြီ ဘလက်ကြီး :) ပြောစရာ မလိုအောင် ကောင်းတယ်. တွေးတာရော၊ ရေးတာရောပေါ့.
ဘ၀ထဲက ဘ၀တွေအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ အမှန်တရားကို ဒဲ့ဒိုးဖော်ပြနိုင်တဲ့ post ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါဘဲ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ ရေးသားဟန်၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း၊ ၀ါကျအထားအသို အားလုံးကို ချီးကျူးပါတယ်။အားပေးနေမယ်။
အရေးအသားအရမ်းကောင်းတယ် အရမ်းအရမ်းအရမ်းကိုဖတ်လို့ကောင်းတယ် လက်ဆော့တယ်သာပြောတယ် အမှန်တွေချည်းပဲ
ဒီပို့ စ်လေး အရမ်းသဘောကျမိတယ်..။ ထုတ်ပြောချင်စရာ မကောင်းတဲ့ အမှန်တွေကို ခိုင်းနှိုင်းချက်ကောင်းကောင်းပေးပြီး ငြင်းမရအောင် ရေးသွားတယ်..။
Essay ပီသပါပေ့ ....